"Isimo sengqondo seZen" - I-Airbnb
"Isimo sengqondo seZen"
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguCeline
UCeline ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Akhiwe Criel de Voiron icandelo kufutshane iivenkile kunye imizuzu-20 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, uya kuba ukuhlala mnandi kakhulu kule intle kwigumbi elinye igumbi lokulala sakhiwa igumbi lokuhlala, lokulala, intwana yamanzi lokuhlambela., Yangasese kunye i-terrace kweyona gadi imnandi yeZen ukuba nesiselo kwaye uphumle elangeni. Sinikezela ngegaraji kunye nebhokisi ephambili ukwenza ubomi bakho bube lula!
obuhle indlu yangasese obabuthandwa igumbi ehotele, hamba-amakhulu kwigunjana kwigumbi lokulala kunye yophahla fan, isefu amabini esandleni sakho, WiFi, tv kunye ukufikelela netflix, kumatshini wokuhlamba impahla, ikhitshi zixhotyiswe njengesicocisi kunye emyezweni behlel.
indawo yokuhlala 10 min ukuhamba ukusuka ezivenkileni, 20 min uhamba ukusuka kwisikhululo Voiron kunye 5 min ngemoto ukusuka Voiron interchange.
Umbuki zindwendwe ngu- Celine
Ndihlala ndisesandleni sakho kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho, ibhaskithi yesidlo sakusasa sinokwenzeka ngesicelo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$210
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Voiron